संघीयतामा आएका अप्ठ्यारालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अघि बढ्नुपर्छ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका उपनेता हुन्— सुवासचन्द्र नेम्वाङ । पूर्वसभामुखसमेत रहिसकेका नेम्वाङ प्रतिपक्षी दलले भनेजस्तो सरकारले दुईतिहाइको दम्भ देखाएको आरोप अस्वीकार गर्छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रक्रियाअनुसार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकृत गरेकाले यसलाई दुईतिहाइको दम्भ भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
विराटनगर महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । देशको ऐतिहासिक नगरी भएर पनि विकासमा पछि परेको विराटनगरमा पछिल्लो समय एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सडक, नाला र ढल निर्माण भइरहेको छ । दुई वर्षभित्र निर्माणाधीन सबै सडकमा ढल र नालासहितको कालोपत्रे गरिसक्ने महानगर प्रमुख भीम पराजुली बताउँछन् ।
उत्पादनमुखी नीति नलिएसम्म व्यापारघाटा बढेको बढ्यै
नेपाली अर्थतन्त्रका लागि बढ्दो व्यापारघाटा सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । बर्सेनि आयात–निर्यातको ग्याप बढेसँगै नेपालमा व्यापारघाटाको आकार बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशको व्यापारघाटा ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
पाँच वर्षभित्र ९९ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुग्नेछ
डा. सञ्जय शर्मा, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव हुन् । भारतबाट २०४८ सालमा सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका शर्माले भारतकै को रुड्की विश्वविद्यालयबाट जलस्रोत विकास विषयमा स्नातकोत्तर गरे ।
इन्द्र महाराजले धानेको अर्थतन्त्र
मुलुकका ६६ प्रतिशत जनसंख्या निर्भर रहेको कृषिक्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा पनि हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र वनक्षेत्रको योगदान अझै पनि २८ प्रतिशत छ । वैदेशिक रोजगारीको बढोत्तरीले रेमिट्यान्स भित्रिँदा र कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गरेको योगदानको प्रतिशत भने बर्सेनि घट्दो छ ।
बैंकको संख्या ठूलो विषय होइन
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘बाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने’ उल्लेख गरेर बाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउन चाहेको संकेत दिएको छ ।
सरकारले जंगे शैली देखायो
अन्ना युनिभर्सिटी चेन्नई भारतबाट एमबीए मार्केटिङ एन्ड फाइनान्स, काठमाडौं युनिभर्सिटीबाट एमफिल फाइनान्स एन्ड स्टक मार्केट अफ नेपाल र आन्ध्रा विश्वविद्यालयबाट फाइनान्स एन्ड स्टक मार्केट अफ इन्डियामा पीएचडीसम्मको अध्ययन गरेका अर्थविद् डा. सुरेन्द्र झा राष्ट्रिय जनता पार्टीका सहमहामन्त्री हुन् । उनको परिवारको राजनीतिक पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेसको हो ।
२०४२ सालमा रोजगारीका लागि भारत गएका त्रिलोचन भट्टले भारतमा नेपालीहरूको दुःख सम्झेर प्रवासी राजनीति सुरु गरेका हुन् । २०४७ साल जेठमा अखिल भारत नेपाली एकता समाजको साधारण सदस्यताबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका भट्ट तत्कालीन सामन्ती राज्यव्यवस्थाका विरुद्ध विद्रोह र आफूले भोगेका समस्या अरू नेपाली युवाहरूले भोग्नु नपरोस् भनेर संघर्षमा लागेका हुन् ।
कृषिलाई सरकारले नै उपेक्षा गरेको छ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी समिति सदस्य हेमराज ढकालले महासंघभित्रको निकै आकर्षक क्षेत्र मानिने कृषि उद्यम केन्द्रको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका छन् ।
जलविद्युत्मा ढुक्कसंग लगानी गर्ने वातावरण बन्छ
तेह्रथुममा जन्मिएका डा. कृष्णप्रसाद (केपी) ओली अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य छन् । कृषिमा स्नातक गरेका ओलीले भूगोलमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुन र जलवायु परिवर्तनबारेको समेत विज्ञ रहेका ओलीसँग विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धानको अनुभव पनि छ ।
प्रधानमन्त्रीले नै विकास र समृद्धिको बाटो देखाउनैपर्छ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार यतिबेला चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको संघीय बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ । यही बजेटसँगै सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन बाहिरबाट जति सहज देखिएको छ, बजेट कार्यान्वयनमा त्यति नै कठिन छ ।
करिडोरलाई आधार बनाएर ब्याजदर स्थिर बनाउन सक्नुपर्छ
तत्कालीन ग्रिनलेज बैंक (अहिलेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक) को टेलरबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेकी अनुपमा खुञ्जेलीले अहिले मेगा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा २७ वर्ष बिताएकी खुञ्जेली वाणिज्य बैंकहरूको पहिलो महिला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । हाल सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकमध्ये महिला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएकी खुञ्जेली मात्र हुन् । शैक्षिक रूपमा व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेकी खुञ्जेली जनशक्ति परिचालन र उत्पे्ररित गर्नमा प्रखर मानिन्छिन् ।